मूल - अक्सर गर्दा वा स्थापना, conversely आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा कार्यक्रम केही हटाउने, तपाईं विशेष अधिकार चाहिएको छ। यस Android, यसको सिस्टम फाइल र उपयोगिता आधारित प्रणाली गर्न मुख्य रूप लागू हुन्छ। त्यसैले के rooting छ? यसलाई प्रदान लाभ के हो, र सही कसरी प्राप्त गर्न व्यवस्थापकले पहुँच?
के rooting छ
एन्ड्रोइड सिस्टम, कुनै पनि अन्य मोबाइल सिस्टम जस्तै, एक कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम को आधार मा आधारित। यस मामला मा लिनक्स छ।
मूल - एक अद्वितीय, लगभग असीमित सम्भावनाहरू प्रशासक विशेष खाता। सामान्यतया, यस्तो प्रयोगकर्ताले प्रयोगकर्ता पहिचायक वा UID रूपमा पहिचान गरिएको छ। मूल पहुँच मार्फत प्रयोगकर्ता खुलेर स्थापना र पनि सिस्टम फाइलहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, कन्फिगरेसन सेटिङहरू, आदि परिमार्जन
एन्ड्रोइड-उपकरणहरू को मुख्य विशेषता तिनीहरूले पूर्ण-fledged लिनक्स कम्प्युटरमा सिस्टम को आधार मा निर्मित छन् भन्ने छ। तसर्थ, प्रशासक मात्र प्रयोगकर्ता खाता छ। Windows को लागि गर्दा, त्यहाँ सम्भावनाहरू को एक नम्बर संग धेरै यस्ता प्रयोगकर्ता छन्। लिनक्स मा, प्रशासक rectification गर्न वस्तुतः असीमित अधिकार र कार्यक्रम को मेटाउने ह्यास स्थानान्तरण, आदि छ
के विकल्प मूल प्रयोगकर्ता के
जानिन्छ, प्रणाली प्रशासक फोनमा सबै अवस्थित आवेदन गर्न असीमित पहुँच छ। तर पनि rooting के हो, र यो संग गर्न सम्भव छ भनेर?
यस मामला मा, प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि फोन मा निम्न सुविधाहरू पहुँच:
फोन स्मृति वा मेमोरी कार्ड मा विभिन्न आवेदन स्थापना। जानकारी सेल को भित्री भरिएको यदि यो बिन्दु विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि आवश्यक नयाँ आवेदन लगभग असम्भव छ स्थापना गर्नुहोस्। साथै, rooting हैश प्रयोग गरेर थप महत्त्वपूर्ण कुराहरू लागि पूरा आन्तरिक वा बाह्य स्मृति जारी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
सीपीयू ओभरक्लकिङ। नियम, निर्माता आफ्नो फोन मात्र भाग प्रयोग गर्छन, त्यसैले यो अब र अधिक स्थिर काम। त्यसैले ताले सबै प्रकारका छन्।
स्थापना र स्टार्टअप प्रोग्राम स्मार्टफोन को कार्य बदल वा विस्तार गर्ने। सामान्यतया, यी अनुप्रयोगहरू खेल Hack गर्न सक्छन् र लेखन, केही प्रणाली फाइलहरू मेट्न, आदि
वितरण प्रणाली वाइफाइ मार्फत मोबाइल इन्टरनेट वितरण। सामान्यतया, सबै फोन मा यस्तो सुविधा बन्द छ। Android को लागि प्राप्त मूल-अधिकार के तपाईं पूरा यी सबै अवसर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
केही अनुप्रयोगहरू प्रयोग प्रशासक विशेषाधिकार लागि
केही विशेष एप्लेटहरू विभिन्न समस्या प्रयोगकर्तालाई-Android उपकरणहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं लगभग हरेक पूर्ण मूल-पहुँचको हालतमा व्यक्तिगत फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले के आवेदन आवश्यक प्रशासक खाता काम आवश्यक छन्? त्यहाँ सामान्यतः प्रयोग र व्यापक धेरै छन्:
आवेदन खेल हैकिंग। सबैभन्दा लोकप्रिय र व्यापक कार्यक्रम को यस क्षेत्रमा प्रयोग GameKiller, खेल अभिभावक वा स्वतन्त्रता छ। तिनीहरूले प्रयोगकर्ता, तपाईँको लिङ्कमा खेल सेटिङ परिवर्तन गर्न अतिरिक्त बोनस, पैसा वा मौका थप्न मद्दत।
अवरुद्ध स्पाम, अनावश्यक कल र एसएमएस। यस्तो आवेदन सामान्यतया पूर्व-स्थापित छन्। तसर्थ, एकदम अक्सर फोन अनावश्यक विज्ञापन र अन्य स्पाम हुन्छ। तर, कार्यक्रम फाइलहरू भने सुधार rooting छ के? यस्तो उद्देश्यका लागि, तपाईं कल र एसएमएस ब्लकर, AdAway र अरूलाई कल नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
विशिष्ट आवेदन नेटवर्क पहुँच अवरुद्ध। सामान्यतया, यो सिस्टम सफ्टवेयर वेब यातायात र पैसा धेरै खर्च गर्दा निरन्तर, अद्यावधिक गरिएको छ। यी सुविधाहरू kis, ड्रोइड पर्खाल, LBE गोपनीयता गार्ड लाइट र अरूलाई असक्षम।
Android मा मूल-विशेषाधिकार के हुन्
जब एकै समयमा तपाईं प्रोग्रामर सबै प्राप्त गर्ने प्रशासक रही पहुँच लाग्छ हुँदैन। त्यहाँ यस्तो अधिकार धेरै विभाग छन्। केही निर्माता द्वारा अनुमति र समय दिइएको हो, र केही हैकिंग प्राप्त छन्:
अस्थायी जड। यो अस्थायी पहुँच तथाकथित। सारा बिन्दु को स्मार्टफोनको पहिलो पुन: सुरु गरेपछि यसलाई गायब छ।
पूर्ण जड। यो विकल्प तपाईं सिस्टम माथि पूरा नियन्त्रण दिन्छ। तर, यो reflash वा अद्यावधिक स्मार्टफोन गर्न सक्दैन।
खोल जड। यो खाता पनि तपाईं प्रणाली फोल्डर मा स्थित छन् भनेर व्यक्तिहरूलाई बाहेक सबै आवेदन गर्न असीमित पहुँच प्रदान गर्छ।
किन निर्माताहरु मूल-अधिकार ब्लक
व्यवस्थापक पहुँच तपाईं समाधान सबै, पनि स्थापना र प्रणाली फाइलहरू गर्न अनुमति दिन्छ। तसर्थ, यी अनुप्रयोगहरू सुरक्षा हेरचाह गर्न स्मार्ट फोन, जस्तै Google, सोनी, मोटोरोला, एलजी रूपमा, थुप्रै निर्माताहरु।
यो किन गरियो? नियम, आधुनिक स्मार्टफोन र आधा को खरीददारहरुले सुविधाहरू र यसको आफ्नै उपकरणको सञ्चालनको सिद्धान्त सजग छन्। छ किन नयाँ स्थापना वा हटाउन वा क्षति महत्त्वपूर्ण प्रणाली फाइलहरू सक्छ पुरानो उपयोगिता हटाउने द्वारा स्मार्टफोन धेरै मालिक। तसर्थ, Android मा मूल अघि, तपाईं राम्रो विचार गर्नुपर्छ। यस Android उपकरणको फलस्वरूप पूर्ण कार्य बन्द हुनेछ वा intermittently काम गर्नेछ।
यस मामला मा खरीदारों तुरुन्त आफ्नो फोन ग्यारेन्टी हात। र कुरा किनभने कौशल को कमी को यो सेवा धेरै छैन विशेषज्ञहरु विफलता को कारण निर्धारित गर्न सक्ने छ। यो आवश्यक छ केहि समय पछि निर्माता ग्राहक लागत क्षतिपूर्ति र आफ्नो राजस्व गुमाउन किन छ।
मूल पहुँच कसरी प्राप्त गर्न
यो सरल प्रश्न मा कुनै एकल जवाफ वा चरण निर्देशनहरूको द्वारा एक सार्वभौमिक कदम हो। आधुनिक बहु-कार्यात्मक स्मार्ट फोन को सबै निर्माताहरु एक सम्पूर्ण फरक कार्यक्रम र प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्। फोन प्रत्येक यसको आफ्नै रक्षा र रोकावट छ।
तसर्थ, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन मा मूल पहुँच प्राप्त गर्न, तपाईं एक पूर्ण बिभिन्न प्रणाली र नियमहरु प्रयोग गर्न आवश्यक छ। र यो लागि उपयोगिता, त्यहाँ अरूको छन्।
तर अब त्यहाँ जहाँ हामी यी मुद्दाहरू छलफल धेरै अनलाइन संसाधन छन्। र त्यहाँ प्रत्येक विशेष मामला र फोन मोडेल लागि सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान खोज्न सम्भव छ।
मूल-अधिकार प्रयोग गरेर को बेफाइदा
तपाईं थाह छ, सबै कुरा यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छ। संभावनाहरु लगभग अपार हो, विशेष गरी यदि एउटा अनुभवहीन प्रयोगकर्ता प्राप्त गर्दछ। त्यसैले, तपाईंले आफ्नो फोन गर्न मूल पहुँच स्थापना गर्नु अघि, यो आवश्यक ध्यान सबै वजन छ।
खाता को मुख्य बेफाइदा:
अकुशल हात मा, प्रयोगकर्ता उपकरण सिस्टम नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गल्तिले तपाईं आवेदन वा भाइरस, आदि स्थापना गर्न चाहेको कार्यक्रम मेट्न सक्नुहुन्छ साथै, खरीदार स्वतः ग्यारेन्टी मरम्मत र सेवा को संभावना हराउछ।
यो प्रणाली र अन्य अनुप्रयोगहरूमा आधिकारिक अद्यावधिक प्राप्त गर्न असम्भव छ। बरु, जो पनि खतरनाक हुन सक्छ कार्यक्रम, को सही संस्करण फेला पार्न इन्टरनेट मार्फत खोजी गर्न आवश्यक छैन।
त्यहाँ कुनै पनि फोन गर्न मूल पहुँच स्थापना को लागि कुनै सार्वभौमिक निर्देशन छ। प्रत्येक सिस्टम यसको आफ्नै nuances र कार्यहरू अनुक्रम छ।
rooting धेरै सकारात्मक पक्षहरू
वस्तुतः असीमित प्रशासक अधिकार प्राप्त उन्नत प्रयोगकर्ताको लागि लाभ को एक नम्बर छ:
क्षमता पूर्ण बदल र एन्ड्रोइड प्रणाली सुधार गर्न। यो अवरोध स्पाम विज्ञापन वेबसाइट र विभिन्न मुक्त आवेदन, र प्रतिस्थापन मानक प्रतीक, विभिन्न उपकरणहरू संग समिकरण, आदि मा
संसाधनहरुकोनूनी लुकेको फोन वृद्धि गर्ने मौका: सबै वक्ता, आदि को मात्रा वृद्धि गर्न प्रोसेसर overclock
सबै स्थापित आवेदन विस्तार अनुगमन प्रणाली। यसलाई इन्टरनेट ट्राफिक र पहुँच निगरानी गर्न यस मामला मा विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
यहाँ rooting छ के को प्रश्नको जवाफ लागि मुख्य विकल्प हो, र तपाईं यसलाई किन आवश्यक छ।
साइटमा प्रतिक्रिया कसरी बनाउने? आफ्नो साइट प्रतिक्रिया फारम
5 सरल भन्दा कम्प्युटर समस्या समाधान गर्ने उपायहरू
कसरी रजिस्ट्री सफा गर्न र आफ्नो पीसी तल slows कि अनावश्यक जंक को छुटकारा
विद्यार्थीलाई गर्न शिक्षकको प्रभाव समस्या। साहित्य र जीवन देखि तर्क
र तपाईं ठ्याक्कै रक थाहा?
अपार्टमेंट मा छोराछोरीको खेल जटिल। छोराछोरीलाई लागि खेल परिसर व्यायाम
चिडियाघर मा गंजा भालु